Loharano fifamoivoizana hafa ao amin'ny Google Analytics? | Martech Zone
Tamin'ity herinandro ity tany am-piasana dia nanontany ny iray amin'ireo mpanjifanay hoe inona ny loharanom-pifamoivoizana "hafa" ao amin'ny Google Analytics (GA).
Tsy dia misy antsipiriany loatra ao amin'ilay tena interface ho an'ny Google Analytics ka mila mihady ianao. Ny loharanom-pifamoivoizana dia fantatra koa amin'ny antonony amin'ny GA. Nanao fangadiana kely aho ary hitako fa ny Google Analytics dia misambotra ny medium ho an'ny mpanelanelana hafa, ilay olona malaza indrindra mailaka.
Raha te hahita ny lisitry ny mpanelanelana hafa dia mila tsindrio ny Loharano fifamoivoizana> Ireo loharanom-pifamoivoizana rehetra. Izany dia hanome anao lisitry ny loharanom-pifamoivoizana rehetra ary koa ny mpanelanelana.
Misy ny dropdown izay ahafahanao manivana amin'ny salantsalany tena izy koa mba hanehoana ireo loharanom-pifamoivoizana rehetra.
Mety ho fitaovana tena ilaina io. Raha mampiasa ianao mailaka barotra hamerenana ny fifamoivoizana hiverina amin'ny tranokalanao, azonao atao ny refesina ny fahaizanao manao amin'ny fampidirana querystring izay mamaritra ny antonony:
http://martech.zone?utm_medium = mailaka
Betsaka ny masontsivana misy raha tianao izany refesio ny fampielezan-kevitrao.
Tags: Google Analyticsloharanom-pifamoivoizana hafaloharanom-pifamoivoizanautm_ Medium
Reputation dia aloky ny aizina an'ny fahefana
Torohevitra roa fanampiny izay tsy hita tamin'i Seth tamin'ny fanadihadiana
14 Mey 2009 tamin'ny 4:07 hariva
Vao nahita izany andro vitsy lasa izay ary tsy afaka mamantatra izany. Fantatro izao ny fomba… misaotra!
14 Mey 2009 tamin'ny 11:26 hariva
Nahita an'io aho nefa tsy mba nieritreritra. Tsara anefa izany. Mikasa ny hanana lasy mailaka aho ka ho mora ampiasaina ity kaody ity.
15 Feb 2009 tamin'ny 2:15 maraina
Misaotra amin'ny tendrony tsara! Handeha milalao an'ity menio dropdown ity matetika aho izao…
15 Mey 2009 tamin'ny 2:00 hariva
Faly ny lahatsoratro fa afaka manampy!
18 Feb 2009 tamin'ny 8:15 maraina
Ny infact dia misy zavatra betsaka azo takarina ho antsika amin'ity loharanom-pifamoivoizana ity. Azontsika atao ny mampiasa fizarana hanavahana ny fivezivezena voajanahary sy tsy misy fotony izay avy amin'ny motera fikarohana izay mora ampiasaina amin'ny fotoana. Misimisy bebe kokoa avy amin'ny GA!
May 7, 2009 ao amin'ny 2: 55 PM
Misaotra amin'ny tendrony tsara! Handeha hilalao an'ity menu dropdown ity matetika ve aho izao?
Apr 21, 2011 ao amin'ny 1: PM PM
Hey Doug - misaotra tamin'ny lahatsoratra. Tsikaritro io fitomboana "Hafa" io nandritry ny herinandro ary azoko izao izay nitranga.
Faly be izahay fa afaka nanampy, Steven!
15 Aogositra 2011 amin'ny 9:32 PM
fa misy fomba hanarahana ny rohy ao amin'ny google analytics mankany amin'ny loharanom-pifamoivoizana. Nahazo fitomboana fitsidihana marobe avy tamin'ny loharanom-pifamoivoizana aho saingy tsy fantatro izany ary tsy hitako amin'ny Internet?
15 Aogositra 2011 amin'ny 10:22 PM
Eny, vitanao tokoa izany saingy maharary kely ihany. Mila tsindrio tsy miankina amin'ny sehatra loharanom-pahalalana referral tsirairay avy eo ho hitanao ny làlana feno amin'ilay referral. Attached dia pikantsary (miaraka amin'ny layout GA vaovao).
31 Okt 2011 amin'ny 8:21 PM
Nahazo fifamoivoizana mivantana 50% aho androany… izay manodidina ny 200-300 ny isan'ireo hits isan'andro. 02% ny fiantsoana mivantana dia vaovao, ary ny tahan'ny fiakarana dia manodidina ny 60% - 70%… Ara-dalàna ve izany? Inona no mety antony? Ary inona ny tahan'ny fiakaranao?
31 Okt 2011 amin'ny 9:19 PM
Heveriko fa ny fifamoivoizana mivantana 50% dia stat mahafinaritra miaraka amin'ny tahan'ny famoahana fariparitanao. Rehefa mitombo ny lazan'ny tranokalanao - indrindra amin'ny fikarohana sy ny fiaraha-monina - ho hitanao ny statistika avo kokoa momba ny fivezivezena sy ny fivezivezena hikarohana ary ny tahan'ny fiakarana avo kokoa hiaraka amin'izy ireo!
Tsy mandrefy tranokala iray hafa aho raha ny marina… Miady amin'ny fironana taloha kokoa amin'ny fironana vaovao aho mba hahazoana antoka fa mizotra amin'ny lalana marina isika. Misaotra nizara an'i Namanyay!
1 Nov 2011 amin'ny 6:19 maraina
Misaotra tamin'ny valiny haingana 😀